Otu esi eme - Ikkaro
Otu esi eme N'onwe Gị ma ọ bụ mee ya n'onwe gị bụ ụzọ ndụ.
Mepụta ihe site na ọkọ, gbanwee ma mbanye anataghị ikike ndị dị, jiri ma jigharịa ha maka ihe dị iche na ihe e mere ha na nke anyị na-agaghị eche na a ga-eji ha.
Otu esi eme ya bu echiche efu, imeputa ihe, ichoputa.
Lelee nkuzi anyị banyere otu esi eme na Mee N'onwe Gị
Aga m akuziri gị ime ihe dicha mfe ma dicha dicha nma maka kọfị kọfị. Ọ dị mfe na m nọ na-eche ma m ga-eme nkuzi ma ọ bụ na ị gaghị eme ya, n'ihi na ọ bụghị nzọụkwụ site na nzọụkwụ, ọ bụ otu nzọụkwụ. Ma enwere m mmasị na ngwọta ndị a kwa ụbọchị nke onye ọ bụla nwere ike iji ihe ndị dị kwa ụbọchị.
Mana ihe doro anya bụ na onye ọ bụla nwere kọfị kọfị, n'ọnọdụ m Dolce Gusto, enweghị ike ịtụfu capsule ahụ maka ọtụtụ ebumnuche. N'ihi na anyị na-emerụ emerụ na n'ihi na ọ na-apụ nke nta nke nta na ahịhịa na-atasị gị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-azụ kọfị ị nwere ike ịmasị isiokwu ndị a 2 maka otu esi esi esi kọfị
Kọfị roaster na igwe eji asa akwa
Arụrụ ụlọ na ite
Achọtara m onwe m Foto Cooph na-aghọ aghụghọ vidiyo and Anam Udeme eri na emechaa m subscribing gi Youtube na iju gị anya na ịdị mfe nke aghụghọ ya na nsonaazụ ha na-enweta.
Ihe ọ na-akụziri anyị bụ inweta mmetụta dị ịtụnanya na-anwa ịnwa ihe ọhụrụ na ọtụtụ echiche. Agbanyeghị, n'ikpeazụ, echere m na nsonaazụ ndị enwetara na ntinye nke otu aghụghọ ahụ ọkachamara na onye na-amu amu ga-abụ ihe ojoo. Echere m na nke a ga-enye maka ndepụta nke «atụ anya / eziokwu» na anyị na-achọ ịhụ nke ukwuu
Anyị na-ewere ohere wekọta ndị anyị niile Mee N'onwe Gị nkuzi na otu ngalaba na 4 isiokwu nke N'onwe Gị Foto, ma anyị nwere usoro aghụghọ ole na ole na ndepụta ahụ.
-Esi mee ka arụrụ n'ụlọ dehumidifier
Ime ụlọ dị mfe, na-enweghị eletrọnik ma ọ bụ usoro ọ bụla. Ka anyị mee ihe na-ekpofu mmiri iji weghara mmiri site na ime ụlọ anyị, ime ụlọ ma ọ bụ ebe ọ bụla anyị chọrọ.
Anyị nwere ike ikwu maka ụdị dehumidifiers 2:
Ndị na-achọ ihe na-eji gel silica
Mbibi na-eme ka mmadụ ghara ikpochasị mmiri
Anyị na-ekwu maka usoro maka obere iru mmiri, dị mma maka ime ụlọ na oghere mechiri emechi.
Ọ bụghị ọgwụgwọ zuru oke, ọ na-enyere anyị aka ịnweta gburugburu ebe obibi.
Maka obere oghere, na igbe
Amaghị m ma ọ bụrụ na ịmara ya, mana ụlọ ahịa akụrụngwa na ụlọ ahịa ndị nwere nnukwu ụlọ na-ere igbe plastik ndị na-amịkọrọ mmiri.
Etu ị ga-esi mee iko mmanya biya nke Viking gị
You bụ cervercero? Ọfọn, nke a agaghị efu n'ụlọ gị. Ma ọ bụrụ na ịnọghị, ọ bụ onyinye kachasị mma, ejiri aka gị mee ... Ka anyị hụ -esi mee ka a Viking biya Foto beerlọ Nga.
"Viking" bụ ihe nkuzi ahụ kwuru ekwughi m na Vikings mere ha otu ahụ. Mana anyị na-anata ikikere n'ihi na ọ bụ ezigbo N'onwe Gị nke Instructables.
A na-eji ite osisi eme ihe n'ime ite ahụ yana ihe ndị bụ isi, anyụike na mma. Osisi a hotara bu elderberry. Mgbe ị na-ahọrọ osisi ọ dị mkpa ịtụle ọka na ọka nke osisi. Nke mere na ọ bụghị osisi gbara ọkpụrụkpụ kama ọ bụ ezi ọka yana veins ndị yiri ya, nke ga-eme ka ị belata nfe dịkwuo mfe.
Otu esi eme ka nhicha nwa
Ọ bụrụ na ị bụ nne na nna ị ga-eji nwa na-ehichapụ ọ bụkwa otu n'ime ihe ndị ahụ ebe ọ bụ na ule ị maara na ị ga-anọgide na-eji ha ruo mgbe ebighị ebi.
Ana m eweta nkuzi esi mee ka mmiri na-ehichapụ, na anyị nwere ike iji nwa anyị na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ na-arụ ọrụ ụlọ. A N'onwe Gị nke «caserotes».
Ihe nhichapụ ndị anyị nwetara dị ọnụ ala, ọ bụ ezie na ọ ga-esiri ike iji ndị a dochie ndị azụmahịa, ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na ị gwụla ma ụlọ ahịa ahụ mechie ma ọ bụ na ị gara njem ma ọ bụ nwa gị nwere ụdị anabataghị ịnakwere ọgwụ ndị a hụrụ na nhichapụ azụmahịa, mgbe ahụ, nkuzi a ga - abara gị uru.
Etu esi eme akwukwo dijital
Anyị ga ahụ otu esi eme digitize akwukwo n'ụzọ dị oke ọsọ na arụrụ n'ụlọ.
Ijuputa akwukwo na-aputa ihe abuo, nke mbu ebe inwetara onyonyo ederede na nke abuo ebe onyogho a OCR, a Ngwa ngwa njirimara njirimara software
Na omenala, a na-enyocha akwụkwọ na ibe, nke a bụ usoro dị nwayọ nwayọ nke gbagwojuru anya n'ihi ntụgharị akwụkwọ, nke mechiri peeji ahụ wee bụrụ na OCR amataghị okwu ndị ahụ nke ọma. ntat na otutu mmad un na-ebuputa ha iji kwado usoro nyocha.
Otu esi eme ka okpukpu 2 × 2 Rubik dice
Ha na-ajụ m site na mail ahụ iwu Rubik's cube maka otu klas nke umuaka 10-11.
Mgbe m na-achọ ihe ngwọta nke bara uru ha, ana m ahapụ gị nke a cOtu esi eme ka okpukpu 2 × 2 Rubik cube na nkpuru.
O di nwute na odighi uru ha n'ihi na odi oke onu ahia, ya na iji ihe ndi n’adighi adiri ha nma, ma obu ike gha enyere gi aka.
Maka ndị gị na-agbaso blog ruo ogologo oge, a magnetik rubik si cube yiri ma 3 × 3
Dị ka ọ dị na nke a, ọ bụ naanị 8 dais, anyị enweghị isi nke anyị nwere ike iji dị ka ihe dị mkpa maka ndị ọzọ niile, yabụ, ihe anyị na-eme bụ iwebata bọọlụ nchara nke ga-eme dị ka nkwonkwo bọọlụ iji kwupụta mmegharị ahụ nke dais.
Otu esi eme ọnya anwụnta
Ọ bụ ọkọchị ma anwụnta anaghị enye anyị ezumike. Anyị ga-ahụ -esi mee ka a arụrụ n'ụlọ anwụnta dị mfe iji mee ma dị oke ọnụ ala na karama rọba na nri idide CO2
Ọ dị mma nke a bụ nnwale. Eziokwu bụ ụnyaahụ m ghọgburu na agaghị m enyocha nsonaazụ ya ruo ụbọchị Sọnde n'ihi na amaghị m ma ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ naghị arụ ọrụ. Nọrọ na-ege ntị na m ga-gbanwee ntinye na nsonaazụ m nwetara.
Ọnyà ahụ kwesiri ịdabere na ya anwụnta na-adọrọ mmasị na CO2 nke ndị mmadụ na-apụYa mere, site na ngwakọta nke agba aja aja na-agbaze na mmiri na yist, a na-emepụta nnukwu ego nke CO2, nke na-eme ka ọ dịkwuo mma.
Otu esi eji foto igwe were igwe eji eme ihe na iko di elu
Ahapụrụ m gị a mini-mbanye anataghị ikike maka were igwe foto were were were were were were were. Ọ bụ nzuzu na ị nwere ike ịhụ ụfọdụ ihe akaebe na a Nexus 4 na a Samsung Galaxy S2
Dịka ị pụrụ ịhụ, naanị ị ga - ejide iko dị ebube na eriri na - agbanwe. Emeela m otu n'ime 30 na-abawanye na ha na-ere n'ụlọ ahịa ọ bụla China echere m maka euro ole na ole
Iji mee ule, ihe Samsung Galaxy S2 Etinyewo m ya na nnukwu ọnọdụ na Nexus 4 dị na akpaka autofocus.
Peeji1 Peeji2 ... Peeji11 Ọzọ →